UDonald Trump akanamdla wokuwa kwiimarike zesitokhwe | Ezezimali
UDonald Trump akanamdla wokuwa kwiimarike zesitokhwe
Xa siphakathi embindini wexesha likamongameli wase-United States, uDonald Trump, inye into eqinisekileyo esinokuyithetha. Ukuvela kweemarike zezabelo kuye kwabonakala kulungile kwaye kumdla wabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngale ndlela, Uxolo kufuneka lube lolunye lwezinto eziqhelekileyo kwizenzo zabo, ngaphaya kwokwenzeka kokwenza izilungiso ezisengqiqweni ngokuhambelana namaxabiso entengo yemarike yemasheya.
Kunokuthiwa kuMongameli uTrump kwanele ukonyusa ukungavisisani kwezorhwebo kunye ne China ukuze isuke Federal Reserve yaseUnited States (FED) ithathe isigqibo sokunciphisa inzala. Ngaloo nto, eli nyathelo liza kuguqulela ekunyuseni ngokubanzi kwiimarike zamasheya, zombini kwelinye icala le-Atlantic nakwelinye. Ukuba, nangayiphi na imeko, i-ace kumkhono uMongameli waseMelika anayo ukuze iimarike zezabelo ziqhubeke nokukhula kwabo phezulu kwiinyanga ezizayo nakwiminyaka apho elawula elinye lawona magunya amakhulu ezoqoqosho. Umhlaba.
Kwelinye icala, kufuneka siqaphele ukuthanda kukaDonald Trump ngotshintsho lwesitokhwe okoko wafika njengomntu oqeshe indlu entsha kwi-White House. Kuba, ngenene, ayinakulityalwa ukuba izamile kwasekuqaleni ukukhulisa ezi asethi zemali ngaphezulu kwamanye amanyathelo ezoqoqosho nezemali. Ngaphandle kweziphumo ezinokuba nazo kwindlela yokuziphatha kwabatyali.
1 NgeTrump imarike yemasheya iphezulu
2 Iza kuhlala ixesha elide kangakanani?
3 Amaxabiso aya kwehla kakhulu
4 Ukufika emva kwexesha kwimarike yaseMelika
5 Ukuhamba kwemali kwiimarike ezikhulayo
6 QE entsha iyaqhubeka
NgeTrump imarike yemasheya iphezulu
Kuyinyani ukuba ii-equities zase-US zikuyo esona sithuba siphezulu kwimbali yayo yonke. Xa yonke into ibonakala ngathi izakuwela, ubuncinci kulo nyaka umiyo kwaye ifikelele kwimeko eyahlukileyo. Okwangoku, iimarike zokulingana zase-US zikwiindawo eziphakamileyo ngalo lonke ixesha. Unyaka emva konyaka ukusukela ukuphela kwengxaki yezoqoqosho ka-2008. Apho abatyali-mali befumene inzuzo engaphezulu kwe-100% kwizabelo zabo. Ngezilungiso ezimfutshane kakhulu kumaxesha exabiso athe ancitshiswa ngalo.
Ngelixa kwelinye icala, imarike yemasheya ayikayeki ukukhula kule minyaka. Ngaphandle kokungabikho kwekhefu kwaye phantse zonke izitokhwe ezikwindawo entle ukuvuya kwabatyali mali abancinci nabaphakathi ababenezikhundla ezivulekileyo kwiimarike zezemali. Kwinto ethathwa njengelinye lawona maxesha alungileyo okulingana kweli. Nangona uloyiko lokuba eli xesha lingaphela lisebenze njengebhuleki kwilinge labatyali mali abatsha lokujoyina iimarike zezemali. Ngokuqonda ukuba ibhegi sele ikhona ibibiza kancinci njengokuvula izikhundla ezinde.
Iza kuhlala ixesha elide kangakanani?
Ngoku umbuzo wesigidi seedola obuzwe ngamawaka kunye namawaka wabatyali mali abancinci nabaphakathi kwihlabathi liphela kukuba eli xesha lokuncoma liza kude kangakanani ukulungiselela umdla wabasindisi. Ngale ndlela, kukho abahlalutyi abaliqela ababonisa ukuba kuya kubakho kude kubekhona utshintsho lwendlela kwixabiso lemali. Oko kukuthi, kude kubekho ukunyuka okuqinisekileyo komgaqo-nkqubo wezemali yi-United States Federal Reserve (FED). Ngokuqinisekileyo mva kunokuba bekulindelwe ziarhente zezoqoqosho. Kwisiqendu sesibini sonyaka olandelayo kwaye oko kungakhokelela notshintsho kwindlela yeemarike zesitokhwe.
Kule meko ke, akukho mathandabuzo okuba kuya kufuneka siqwalasele iintlanganiso ezilandelayo kwiFED. Kuba ngokuqinisekileyo iya kunika isikhokelo ngaphezulu kwesinye malunga nokuba iinjongo zinokuya phi kubaphathi bezemali baseMelika. Ngeyona njongo iphambili yokuphuhlisa isicwangciso-mali sokungena okanye sokuphuma kwiimarike zezabelo kwiinyanga ezizayo kwaye kuxhomekeke kwizigqibo eziza kwenziwa kwelinye lamaziko abaluleke kakhulu emhlabeni.
Amaxabiso aya kwehla kakhulu
Ngalo mzuzu kanye xa utshintsho kwindlela yentengiso yemasheya luyinto yokwenyani, kuyakufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba zeziphi ixabiso elinokushiya imali eninzi endleleni. Ngale ndlela, ukubheja kucace gca kubo bonke abahlalutyi bezemali. Iya kuba ngabo ezingakumbi ziye zaxatyiswa kwiminyaka yakutshanje abo bazobethwa kabuhlungu koku kuncitshiswa kwamaxabiso. Ngaphandle kokunye ukuthathelwa ingqalelo kobuchwephesha kwendalo kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko. Le yinyani yokuba kude kube ngoku akukho mmeli kwiimarike zezemali okhe wabuza.
Ngelixa enye into ekufuneka ithathelwe ingqalelo ukusuka kula maxesha achanekileyo yile inento yokwenza ngokuthe ngqo nomba wobugcisa wamacandelo adweliswe kwiimarike zezabelo. Ngale ndlela, akukho mathandabuzo ukuba enye yezona zinto zimbi ziibhanki kunye namaqela ezemali. Ayisiyiyo kuphela e-United States kodwa kwihlabathi liphela ngenxa yokwehla kwexabiso lemali kwaye oko kungakhokelela kumaxabiso abo angaphantsi kakhulu kwexabiso ekujoliswe kulo. Njengoko kusenzeka eSpain, ngamaxabiso okubaluleka okukhethekileyo njenge BBVA okanye iBanco Santander ukuba urhwebo ngezaphulelo kumaxabiso abo.
Ukufika emva kwexesha kwimarike yaseMelika
Ngayiphi na imeko, ukuba injongo yakho kukungena kwiimarike zaseMelika ukusukela ngoku ukuya phambili akukho mathandabuzo ukuba ayisiyiyo elona xesha lililo lokuphumeza esi sigqibo. Akumangalisi ukuba ulahlekile lonke ulonyuso kule minyaka idlulileyo kwaye ungothuka xa ungena, ukulungiswa kwamaxabiso esitokhwe kungaqala. Nokuba uphantsi koxinzelelo olukhulu njengesiphumo sokuba ezi xabiso zixabise kangakanani kule minyaka isibhozo idlulileyo yokuthengisa. Oko kubizwa ngokuba kukuphakama kwendawo kunokubangela ukuba ukuthengwa kuncitshiswe kakhulu kwiiseshoni ezilandelayo kwimarike yemasheya.
Asinakulibala, kwelinye icala, ukuba ii-equities zaseMelika zigqithisiwe kwaye zinokuthi nangaliphi na ixesha lungisa le meko yobugcisa ezizodwa. Kumaxabiso akhuselayo anokunika ukungathandi kubatyali mali abancinci nabaphakathi. Kuba, enyanisweni, onke amacandelo emarike yemasheya aye alixabisa eli xesha libanzi leemarike zezabelo zaseMelika. Ungathandabuzi ukuba ngeli xesha unokuninzi okuphulukileyo kunokuphumelela kule marike yamanye amazwe kwaye ke ayifanelekanga ukubeka emngciphekweni imali yakho ngendlela engeyomfuneko.
Ukuhamba kwemali kwiimarike ezikhulayo
Into enokwenzeka ukusukela ngoku kukuba imali iya kwiimarike ezisakhulayo, kanye xa kunjalo Ndikudlulisile ukulayisha kwizikwere zaseMelika. Ngokuvela kwamathuba amatsha eshishini kunye namaxabiso okhuphiswano kakhulu ukwenza ukonga kunenzuzo ukusukela ngoku. Ngayiphi na imeko, akusayi kubakho khetho ngaphandle kokukhetha kakhulu kwizigqibo eziza kwenziwa kwiiveki ezizayo. Kuba ayizizo zonke iimakethi ezihlumayo ezibonisa imeko efanayo yezobuchwephesha. Akukho ngaphantsi kakhulu kwaye le yinto ekufuneka uyixabisile ukuze usebenze ngamaxabiso emarike yemasheya.
Kukwabaluleke kakhulu into yokuba uxinzelelo lokuthengisa lubekwa kumthengi ngu i-inertia yakho yeemarike zezemali. Oku emva kwayo yonke into enengqiqo eyenzekayo kwizabelo kwaye ayimelanga kothusa nabani na, ingakumbi abatyali mali abancinci nabaphakathi. Kungenxa yokuba asinakulibala ukuba sijongana neemarike zokulingana nayo yonke into ethetha eli gama nangaphaya kolunye uthotho lokuqwalaselwa kwesibini. Ukuze ukwazi ukwenza esona sigqibo sichanekileyo sokukhusela imali oyityalileyo.
QE entsha iyaqhubeka
Ngayiphi na imeko, inye into esinokuyithetha ngokuvakalayo ngokupheleleyo kwaye lelo gunya likaTrump lilungile kwicandelo lotyalo-mali. Ngaphezulu kwawo nawuphi na omnye umongameli wenye yezoqoqosho oluphambili emhlabeni. Ukuya kuthi ga apho unokufikelela khona Powell yazisa ngeQE entsha. Into enokunika elinye ixesha elinabileyo kwiimarike zamasheya kwihlabathi liphela. Ewe kunjalo, kusenokubakho isimanga kule meko kwintsalela yonyaka.
Ngalo mongameli wase-United States, nantoni na enokwenzeka kwiimarike ze-equity, nokuba iimarike zentengiso zingaqhubeka nokunyuka. Kodwa kule meko, izilungiso ezilandelayo zinokuba namandla ngakumbi kunokuba bekulindelwe kwasekuqaleni. Ekupheleni konyaka siza kuba nemikhondo emitsha malunga nokuba yintoni enokwenzeka kwezi asethi zemali ukwenza esona sigqibo sigqibeleleyo sotyalo-mali, yiyo loo nto emva koko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » UDonald Trump akanamdla wokuwa kwiimarike zesitokhwe
I-Bankinter ifumana inzuzo kwirekhodi